Ukulandwa kwamakhosikazi wesifazane amavidiyo nama-movie mahhala | Ibhulogi Elikhukhulayo Elikhulu
U-Lianna Lawson Uyalawula
I-Cruel Reell - iNadel Theatre
Isibhakela Esithathu Esihlakaleni - UZiqu-zintathu ...
UNatalie Mars, inkosikazi iDamazonia –...
UShemale ugxunyekwa eboshwe nge-strapon anal ...
USissy slut uLily Lulu uthola ingxoxo yeWebcam ...
Unkulunkulukazi uSerena (Unkulunkulukazi uGynarchy), uMistr ...
IKlarisa Leone - Ukushefa Okuseduze
I-Lexi Sindel & Natalie Mars - ...
Isibhakela sothando - tattoo trans trans ...
Sawubona! Ngakho-ke, lesi sigaba sinikezelwe kuzo zonke izinto zobufazi! Yebo, uzothola amavidiyo ama-hardcore femdom mahhala lapha. Akukuhle lokho? I-PSA ebalulekile: amamethrikhi ethu akhombisa ukuthi abanye abantu beza lapha nokuseshwa okufana ne- "fendom", ngakho-ke uma ungomunye walabo bafana beqiniso, funda nje incwadi noma okunye, kulungile? Funda ukupela, umngani-o. Yi-FEMDOM, "ubufazi". Asithandi uhlelo lolimi olubi lapha, kepha sithanda ukubuswa kwe-porn yabesifazane.
Uma ukholelwa ngokuqinile ekuphakameni kwabesifazane, uze endaweni efanele. Amantombazane ayesabeka futhi azalwa ephakeme. Amadoda enziwa ukuthi awakhonze. Ungathanda ukukhulekela umzimba wentombazane ethile eshisayo, akunjalo? Manje umfana omuhle lowo! Ukuphakama kwabesifazane, ukubusa kwabesifazane, noma yini ongakubiza ngakho - yindlela esidlula ngayo lapha. Kunokuthile okushisayo ngendlela emangalisayo ngokulawula abesifazane. Ngokuvamile lawo mantombazane mahle futhi ayazethemba, ngoba ayazi ukuthi ayashisa. Abanye abantu bathanda amantombazane anamahloni futhi anamahloni, kepha siyawathanda amantombazane ethu ukuthi abe nolaka futhi, ngokungabi nesikhathi esincono, sithanda ukubusa abesifazane. Ngawo wonke ama-buzzwords esifazane athambile kule minyaka embalwa edlule, akukho lutho olusenza sihambe njengokuthi "ubukhulu besifazane". Ukuqondisisa nje kusho ukuthi abesifazane baphakeme. Ngaphandle kokusho into efanayo kaninginingi, ake sivume nje ukuthi siphila futhi sifa ngobukhulu besifazane.
Manje njengoba isingeniso sesiphelile, ake sifike kuso: lesi sigaba seforamu yethu enkulu yezocansi sikuvumela ukuthi ulande izinkulungwane ngezinkulungwane zamavidiyo wabesifazane. Uma ukujabulela ukubukela ukuthotshiswa kwe-POV, amavidiyo afakwa amankankane, unqamula imiyalo, iziqeshana zokubusa izinyawo, noma yini nakho konke okufana nokufana nobufazi, uze endaweni efanele. Ngaphandle kokuthi uphuzile futhi weza lapha ufuna "ividiyo ye-fendom", lapho-ke ungasesha okuqukethwe kwakho kwevidiyo okungenacala kwenye indawo. Ngeke sibekezelele isipelingi esibi, i-goddamit. Kuyi-FEMDOM!
Noma kunjalo, ngiyaxolisa ngokuphazamiseka, uma uthanda ukubuka abesifazane bephethe amadoda, uzowujabulela umzamo wethu. Okusho thina ngokuyisisekelo abasebenzisi bethu, ngoba yibo abalayisha amavidiyo amaningi njalo ngosuku. Akufani nokuthi nathi asisizi, kepha ake sinikeze isikweletu lapho kufanele khona isikweletu. Uma usuqale ukubuka amavidiyo wesifazane ngaleli zinga eliphakeme, akusekho ukubuyela emuva. Asinazo zonke izinto ezijwayelekile, wonke amavidiyo adume kakhulu nokunye okunjalo, sineqoqo elibanzi lamavidiyo we-amateur nawo wonke amagugu afihliwe laphaya.
Abesifazane abaphethe abesilisa yigama elibanzi, kepha sinazo zonke izinhlobo ezihlobene nabesifazane lapha. Kukhona umucu wazo zonke izibungu zabesifazane besifazane laphaya, abantu babelana ngamavidiyo wabo abawathandayo, bakhuluma ngawo, bayaxoxa, njll. Awutholi nje amavidiyo wamahhala okulula ukuwalanda futhi uwajabulele, uthola nomqondo wokuthi umphakathi. Ngubani ongakuthandi ukukhuluma nabantu abanomqondo ofanayo nokuxoxa ngezinto abazithanda ngokweqiniso? Ngakho-ke, ungabi isihambi. Musa ukuhaha - landa, wabelane futhi uxoxe. Abesifazane baphakeme futhi uyazi indawo yakho kulo mhlaba. Zizwe sengathi uyingxenye yento enkulu.
Ibhulogi Elikhukhulayo Elikhulu > Blog > omfisha > Ukubusa Kwesifazana